DEG DEG: Suldaan ka tirsan Salaadiinta Somailand oo goor dhow Muqdisho lagu xiray | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii DEG DEG: Suldaan ka tirsan Salaadiinta Somailand oo goor dhow Muqdisho lagu...
DEG DEG: Suldaan ka tirsan Salaadiinta Somailand oo goor dhow Muqdisho lagu xiray
Muqdisho (Dalkaan.com) – Wakiilka Suldaanka Beesha Makaahiil Samaroom Suldaan Cabdulqaair ayaa hadda lagala baxay gurigiisa, waxaana lagu xiray Xarunta Dambibaarista CID ee KM4.
Suldaanka lagala baxay gurigiisa ayaa waxaa dhowr jeer u yeertay xeer ilaalinta Qaranka, wuxuuna diiday inuu tago, waxayna xogaha aan helnay sheegayaan in laga gudbiyey dacwad.
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay Caasimadda Online ayaa tibaaxaya in Suldaanka loo xiray arrimo la xiriira kuraasta beeshiisha, gaar ahaan kursiga 226 oo ay ku fadhiso Xildhibaan Maryan Maxamuud.
Xarigan waxaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Garyaqaan Baashe Axmed Yuusuf oo u rabay kursiga tirsigiisu yahay 226 in loo xiro musharax ay qaraabo yihiin oo lagu magacaabo Yoonis Bashiir Muuse.
Xariga loo geystay Suldaanka ayaa kusoo aadayo xilli dib loo bilaabay doorashada xubnaha Golaha Shacabka, waxaana Muqdisho ka socdo loolan loogu jiro kuraasta Gobolada Woqooyi ee Somaliland.
Wixii faahfaahin ah ee soo kordha halkan ayaan idinku soo gudbineynaa.
Ciyaartoyda Bayern Munich oo ku qancay in Lewandowski uu u dhaqaaqayo...
Alexander Hassenstein/Getty Images Ciyaartoyda Bayern Munich ayaa ku qanacsan in Robert Lewandowski uu ku biirayo Barcelona . Lewandowski ayaa diiday isku dayga Bayern ee ah inay wadahadalo heshiis kordhin...
SAFIIRKA CUSUB EE MARAYKANKA OO MAANTA MUQDISHO SOO GAARAY.
Baarlamaanka cusub oo yeeshay guddoon KMG ah iyo kulan loo balansan-yahay
Kiiskii Ikran Tahliil oo ku dhammaaday aan doorashada aadno dambi la’aan...
Dacwad ka dhan ah Farmaajo ‘oo loo gudbiyey’ maxkamadda ICC